Umhla My Pet » 5 Tips Ukuze Onokuphila Long Distance Relationship – Edition Student
ukubuyekezwa: Nov. 25 2020 | 3 min ukufunda
ixesha ehlotyeni yinxalenye elithandekayo ubukho yomfundi. Akukho mathandabuzo ngalo nto. Ufumana ukuba ndikhe ndilibale kanye eyenzekayo esikolweni, lokuphumla kancinane, ukufumana wakho tan, sibusele Fruity ngaphandle ziikhokhonathi, uqhagamshelwano kwaye uqhagamshele ngokutsha kunye nosapho lwakho kunye nabahlobo idolophu. zonke izandi grand mhle ngokwenene.
Ngaphandle iinkcukacha lisuntswana ... uziva engaphelelanga. Ufana nomntu cone ngaphandle ice cream. Kanye pizza ngaphandle itshizi, ezifana miley ngaphandle ibhola ukwaphulwa, indawo Bonnie engasese ngaphandle njengoClyde yakho.
Mna asithethi ukwahlulwa iwele lakho fraternal; Mna wayebhekisela kwixesha nzima ulwalamano eyaziwa ngokuba yi "yokuzahlula umgama omde". Emva kokuchitha iinyanga ezisibhozo emangalisayo esikolweni kunye lover sakho, wena ke ubuyele ezikhundleni zakho ekhaya bafunde iintsontelo yokuba ngaphandle ngoxa ukuba yintlantsi ekhethekileyo.
nibe kube lula kwaye lungathandani intombazana cute kumnyango olandelayo nabasukuba ukuya sikolo sinye, okanye lungahlukaniswa nge weekhilomitha, neelwandle, amazwekazi mhlawumbi nokuba. Iba yomelele ngamaxesha kwaye akukho lula feat ukugcina uqhagamshelwano ukuba inike ekuhambeni konyaka wesikolo.
into kakuhle kulungile mna apha kuwe.
Okokuqala kwaye ngaphambi kwento yonke, ukuzibophelela ngundoqo.
Yinto akumangalisi ukuba kuphela ngabo bazinikeleyo nobudlelwane phakathi kwabo kuya kwenza kube wokugqibela. DUH. Yingxaki enjali le nto uya kuba ulwalamano kumgama kakhulu. Ukungabinako ukubona omnye komnye yonke imihla kufuna rhoqo kunye nomoya esiba yenzondelelo nokunyamezela nokunyaniseka omabini amacala.
Wasebenzise onke iteknoloji kakhulu, elektroniki kunye gizmos.
Siphila kwihlabathi yedijithali iikhompyutha, cell phones kunye nethekhinoloji Abazobi. Emva mini malini eninzi nje ukubiza umntu efowunini ... kule mihla sinako Skype nabani na ehlabathini ngenxa ngokupheleleyo ivideo. Kufuneka kube lula, ngoko ngokwenene kufuneka abanasikhuselo. Technology sisixhobo kakhulu ukuba ukusebenzisa, ingaba incoko ngefowuni lamaxesha, uthetha efowunini, enye iindawo ezininzi eendaba zentlalo okanye Skype. Sebenzisa kwaye usebenzise ngokufuthi.
Umgama phakathi kwakho yakho ebalulekileyo nezinye idala amathuba kuwe ukubonisa ubuchule nobuciko. Sebenzisa Eyona iphepha nosiba lokwenene ukuthumela ileta ngendlela endala lixesha, isothuse lover yakho iintyatyambo zisiwe endlwini yabo (ujonge inani 2 kwaye Order kwivenkile seentyatyambo) okanye ukwenza betyelela bengalindelwanga classic xa kunokwenzeka. Beka umnqwazi wakho yokucinga yaye zibonisa besimbo oyinyaniso.
Bamkela ixesha uwufu- ukuchitha kunye.
Kuba uya kuba bucala ixesha elide kangaka, ukuba ngaba ukulawula ukungena utyelelo uye kwezinye kaJona, kuya kuba ngokuqinisekileyo super ezikhethekileyo. Mna andikanyuki, esithi kuya kuba lo mfanekiso uthando imvula evela Notebook, kodwa iya kuba futshane.
Khumbula ukuba akukho nto ekupheleni kwehlabathi.
Ya ku fumana kusenokuba nzima ngamanye amaxesha kwaye uya ufuna ikheli kwindawo foetal kunye zosana (Ndakhe bendikho- hayi shame) kodwa khumbula ukuba umgama ngokufihlakeleyo usempilweni. Ukuba ngaphandle iqabane lakho kuya kukunceda xabisa ixesha lakho kunye kakhulu kwaye kuya kufuneka ukuba siqhelane kuyo okanye kam-. Ngoko ngcono xa uqala abasenkonzweni ngoku ekunene?
Makhe ezi iingcebiso zibe ntlanu asebenze uthando guru lwakho kwiinyanga zasehlotyeni kwaye uya kuba kuhle nje. Uyafana mhlawumbi uza kucelwa amaxesha aliwaka, "Uphi na esinye isiqingatha yakho?"Kwaye" nangoku niyathandana what's--igama lakhe?"Kodwa ngoku unako ngokuzithemba ukuphendula:" Mna kunxibelelwano rhoqo naye / bakhe, Kwaye ngoku kwikhaya labo "kwaye" ewe, ukuba bet Ndim ".